Daldalli Sirna Abbaa Irree Irroomsu Dhaabbachuu Qaba!
Date: June 10, 2011Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Waxabajjii 09,2011) Hawaasti Oromoo magaalaa London fi naannoo san jiraatan akksumas hawaasti Ogaaden, Sidaamaa fi Amharaa walta’uudhaan walgahii Investimantii biyya UK fi Itiyoophiyaa giddiuu tolfame mormuun gabaasame.
Oromedian Maddi Oduu ABO/MOA/ wabeeffatee akka gabaasetti, hiriirri diddaa sirna wayyaanee magaalaa guddoo UK, London, keessatti taasisame kun dantaa babal’ina misooma biyyaa sirna wayyaanee fi mootummaa UK (UK-Ethiopia Investment Trade and Tourism Forum) mijeessu Waxabajjii 9, 2011, magaalaa London bakka ‘Institute of Electrical Engineers’ jedhamutti geeggefame mormanii akka ta’e beekamee jira.
Wagahii kana irratti kan argaman gama Itiyoophiyaatiin jila ministeerotaa kan itti aanaa muummicha ministeera fi ministeera dhimma alaa mootummaa Itiyoophiyaa kan ta’e Ato Hailemariam Desalegn ture.
Gama UK tiin Mr. Henry Bellingham (Ministeera dhimma frikaa), Kubbaaniyaa Gorsitoota Investmentii kan ta’an (Developing Markets Associates (DMA) and Africa Matters Ltd (AML) ka jedhaman, akkasumasTujaartotni adda addaa irratti qooda fudhataniiru.
Kaayyoon hiriira diddaa immoo mootummaan Itiyoophiyaa sirna abbaa irree fi sirna murna xiqqaa fedhii saba guddaa ukkaamsee jiru ta’ee mirga dhala namaa akka malee dhiitaa jiraachuu isaa utuu beekamuu Mootummaa kana waliin daldaluu fi invest gochuun dhiittaa mirga dala namaa jabeessuu qofa utuu hin taane daldala salphinaa fi qaanii hinqabne (Unethical and immoral investment) ta’uu isaa hubachiisuuf akka ta’e wayituma kana ibsamee jira.
Keessaayyuu, mootummaa Ingilizii fi tujaartoti fedhii ummataa dagachuun hireen abbootii irree akka furdatu godhan seenaa keessatti akka itti gaafataman kan ibsan hiriirtoti kunneen, fedhii ummataa dagachuun abbaa irree waliin hariiroo tolfachuun dantaa egere karaa dinagdee galmeessuuf itti adeemamu gama hundaa akka miidhu hubachiisamee jira.
Kunis mootummaa abbaa irree ta’ee fi itita hin qabne keessatti invest gochuun qabeenyaa isaaniif wabii akka hin qabnes hubachiisuu ture.
Akkasumas, faalla mirga dhala namaa akka ta’e hubachiisuu dhaan investmentiin yeroo ammaa biyya Itiyoophiyaa keessatti ta’u dinagedee biyya sanaa guddisuuf utuu hin taane humna waraana gabroomfataa Wayyaanee jabeessuu fi hacuucaa ummata irratti dagaagsuu , akkasumas qabeenyaa dhuunfaa hogganotoota Wayyaanee ol kaasuu akka ta’e akka hubatamu taasisaniiru. Itti dabalees Qotee bulaa Oromoo lafa isaa irraa ammas daran akka buqqisanii alagaaf kennuu, albuudaa saamuu fi walumaa galatti biyya gurguruuf akka saganteeffame hubachiisan.
Kanaaf ummatni Oromoo fi Itiyoophiyaa marti ololli maqaa investmentiin adeemaa jiru kun biyya gurguruu, humna waraana Wayyaanee jajjabeessuu fi qabeenyaa dhuunfaa hoggantoota Wayyaanee gabbisuu irraa kan hafe dinagdee biyyaa fooyyessuu akkan hin dandeenye hubachuu qaban jedhaniiru.
Kamna maleesa, Hawaasti Oromoo, Ogaadeen, Amharaa fi kanneen biroo hiriira kana irratti, Investmentiin kun qabeenyaa saamuu fi mootummaa Wayyanee abbaa irree ( dictator) ta’e aangoo irra tursuuf kan saganteeffatame ta’uu isaa hubatanii waan kana dura akka dhabbatan waamicha dabarsanii jiru.
Previous Previous post: Interview with poet Asafa Tefera Dibaba
Next Next post: OLF statement on the report of MGSE aborted bomb plot of AU